Sida musqusha loogu badalo fikrado fudud | Bezzia
Susana Garcia | 03/05/2021 20:00 | Qurxinta, Isbeddellada qurxinta
Musqusha ayaa ka mid ah meelaha gurigeenna ku yaal waxay ubaahantahay shaqooyin badan iyo isbadalo hadaan rabno inaan cusbooneysiino. Laakiin waa suurtagal in lagu beddelo muuqaalkeeda xoogaa taabasho ah iyada oo aan loo sii marin shuqullo waaweyn ama habab adag. Taasi waa sababta aan u fiirsan karno dhowr tabaha iyo fikradaha si aan ugu bedelno musqusha qaab sahlan oo naga dhigaya inaan dareemo inaan haysanno meel gebi ahaanba cusub.
Cusbooneysiinta meelaha ma ahan wax fudud, laakiin waxaan ku sameyn karnaa fikradaha qaarkood. Waxaa jira dad maareeya inay beddelaan meelaha ay ku jiraan guriga iyaga oo aan qaban shuqullo waaweyn, si ay uga faa'iideystaan ​​waxa ay haystaan ​​oo ay lacag ugu keydsadaan isbeddelka. Waxaan arki doonnaa xoogaa fikrado ah oo naga caawin doona inaan musqusha ugu bedelno qaab sahlan.
1 Adeegso rinjiga marmarka
2 Ku dhiirato sawirka gidaarka
3 Beddel saxanka iyo muraayadda
4 Ciid cusub ku dar
5 Ku dar dhir
6 Isku dar dharka iyo faahfaahinta
Adeegso rinjiga marmarka
Mid ka mid ah waxyaabaha had iyo jeer lagula taliyo markaad dayactireyso meelaha banaan adigoon maalgashi badan galin ayaa ah inaad iibsato rinji wanaagsan si aad wax walba gacanta uguhesho. Ma aha oo kaliya inay darbiyada u muuqan doonaan cusub, laakiin waan beddeli karnaa midabka musqusha Wax walbana ka dhig nolol cusub Xaaladdan oo kale waa inaan isticmaalnaa rinjiga lebbiska haddii ay tahay waxa aan ku haysanno musqusha. Waxaa jira rinjiyeyaal badan, oo leh derin, satin ama dhaldhalaal dhalaalaya, si aad u siiso musqushaada muuqaal cusub. Tani waa mid ka mid ah tallaabooyinka ugu horreeya ee ay tahay inaad tixgeliso. Sidaas awgeed waad beddeli kartaa barkadda qubeyska, aagga lagu maydho ama darbiyada oo dhan.
Ku dhiirato sawirka gidaarka
Waraaqda ayaa ah cunsur aan inta badan ku isticmaalno qolalka jiifka iyo weliba hoolka ama qolalka fadhiga. Laakiin ma aha wax aad u badan in lagu arko aagga musqusha. Si kastaba ha noqotee, maanta waa a cunsur tayo sare leh oo waliba loo isticmaali karo qaybo ka mid ah musqusha. Haddii aad leedahay meel derbi ah oo aan dusi lahayn, waad ka faa'iideysan kartaa oo ku dhiirran kartaa gidaarka weyn si aad ugu siiso musqusha musqusha muuqaal quruxsan oo midab leh. Haddii musqusha ay tahay qaab guridda, fikraddu wey fiican tahay waxaadna ka dhigi kartaa musqushaadu inay noqoto meel aad u qurux badan.
Beddel saxanka iyo muraayadda
Waxaad awoodi kartaa maal gashto unug cusub oo aan waxba tarayn iyo muraayad. Waa qayb aad u muhiim ah oo ka mid ah musqusha oo leh joogitaan iyo caan. Haddii aynaan beddeli karin waxyaabaha kale, gelinta saxanka weelka cusub ee keydka iyo muraayadda aad jeceshahay waxay noqon kartaa hal dariiqo oo musqusha mar labaad looga dhigo mid cusub. Muraayadaha qaabka ugu fudud, wareega ama guridda ayaa aad caan u ah. Qeybta hoose waxaad ku ridi kartaa qeybta wax lagu keydiyo si wax loogu kaydiyo midab iftiin fiican leh. Si kastaba xaalku ha ahaadee, qaabka alaabtu waxay ku xirnaan doontaa qaabka suuliga.
Ciid cusub ku dar
Tani horeyba waa isbeddel aan qof kastaa sameyn karin, laakiin runtu waxay tahay inay suurtagal tahay in lagu beddelo sagxadda shaqo yar maanta. Waxaad dooran kartaa dabaq kaas oo ah ku rakib nidaamka riix dabaqyada vinyl-ka ku dayashada qoryaha. Waxaa jira iyaga oo runtii midabbo qurux badan leh waxayna ka dhigayaan booska inuu u muuqdo mid casri ah oo hadda socda kaliya ku darista dabaqa aan haysanno haddii uu horay uga baxay qaabkii.
Ku dar dhir
ka dhirtu waxay siisaa midab iyo nolol wax kasta. Taasi waa sababta ay u noqon karaan fikrad aad u fiican oo lagu qurxiyo meelaha. Ku darista dhirta iyo ubaxyada waxay ku dareysaa bohemian iyo taabasho gaar ah meel kasta. Xaalada musqusha, waa inaan ku darnaa dhir dhibka u leh jawiga qoyan ee badanaa jira, maadaama hadii kale aysan noolaan doonin Laakiin waxaa jira dhir qaar ka mid ah oo ku habboon meelahaas.
Isku dar dharka iyo faahfaahinta
Wax kale oo aad awoodid beddelidda si fudud waa dhar iyo faahfaahin yar, taas oo iyaduna isbedel weyn samayn doonta. Raadi shukumaanno u dhigma oo leh faahfaahin qaar waxaadna arki doontaa in isku-darkaasi uu siinayo isku-xirnaan gaar ah goobta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Qurxinta » Sida loogu bedelo musqushaada habka ugu fudud